Thursday January 07, 2021 - 16:29:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Golaha Koongareeska Mareykanka ayaa dib ula wareegay xaruntoodi shalay laqabsaday waxayna cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen guushii Joe Biden iyo Kamala Haris ay ka gaareen doorashooyinka.
rabshado daran ayaa shalay ka dhacay golaha Koongareeska
Labada gole ee Koongareeska ayaa saxiixay in Joe Biden uu noqday madaxweynaha rasmiga ah ee Afarta sano ee soo socota wadanka maamuli doono kadib markii uu 306 cod ka helay guddiyada doorashooyinka gobollada ee loo yaqaan Electrol Collage halka Trump uu helay 232 cod.
Tani ayaa soo gaba gabaynaysa murunkii doorashooyinka ka taagnaa, saacado kadib markii la ansixiyay madaxtinimada Biden waxaa ogolaaday Mike Pence madaxweyne ku xigeenka maamulka Trump oo shaaciyay in uu aqoonsanyahay go'aanka kasoo baxay golaha koongareeska.
Donald Trump ayaa isna qirtay guuldarradiisa farriin uu soo dhigay ciwaan uu leeyahay mid kamida lataliyaashiisa ayuu ku sheegay in uu xukunka si nabad gelya ah ku wareejin doono marka lagaaro 20-ka bishan janaayo oo ay ka harsantahay 13 maalmood oo kaliya.
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri "waxaan balanqaadayaa in xil wareejintu ay si nabad gelya ah udhici doonto 20-ka Janaayo".
inkastoo dhawaqaas uu kasoo yeeray Trump hadane laguma kalsoonaan karo taas oo keentay in sare loosii qaado xaaladda feejignaanta si looga baaqsado rabshado lamid ah kuwii shalay dhacay.
iyadii sidaas ay tahay oo xisbiga Jamhuuriga guuldarro dhabarka loo saariyay ayay hadane kooxaha dimuquraadiyiintu majaraha uqabteen labada gole ee Koongareeska, xisbiga Biden oo horay uhayay hoggaanka baarlamaanka ayaa shalay lawareegay aqlabiyadda golaha Senate-ka kadib markii doorasho ku celis aheyd oo gobolka Joorjiya ka dhacday ay ku guulaysteen laba senatar oo xisbiga dimuquraadiga katirsan.